LG dia manolotra bokotra iray ho an'ny Google Assistant amin'ny findainy vaovao | Androidsis
Eder Ferreño | | LG, Fitaovana hafa
Ireo mpanampy virtoaly dia manohy mandroso eo amin'ny tsena, manana fitomboan'ny fisian'ny fitaovana marobe. Ity dia zavatra azonay hamafisina indray mandeha miaraka amin'ny telefaona LG vaovao. Headphones tsy misy tariby izay atolotry ny orinasa koreana, ary izay miavaka amin'ny fananana bokotra ho an'ny Google Assistant. Ka rehefa tsindrio io dia miditra amin'ny mpamosavy ianao.
Noho izany, ilay mpampiasa manana headphones LG ireto dia tsy mila milaza ilay baiko mahazatra hoe "OK, Google". Afaka miditra mivantana amin'ny Google Assistant ianao amin'ny alàlan'ny fanindriana an'ity bokotra ity amin'ny findainao. Fomba mora kokoa ho an'ny maro.
Ireo headphones ireo dia mitondra ny anarana LG TONE Platinum SE. Izy ireo dia tohin'ity sehatr'asa Koreana ity, ary amin'ny lafiny famolavolana dia tsy mampiseho fanovana be loatra izy ireo. Izy ireo dia mitovy amin'ny andiana processeur teo aloha izay natolotry ny orinasa fotoana vitsy lasa izay. Izao miaraka amin'ny bokotra vaovao ho an'ny mpanampy.
Ny hevitra fampidirana bokotra hidirana amin'ny Google Assistant dia noheverina nandritra ny fotoana niresahanao. Tena hahasoa indrindra izany raha mila mampiasa Google Translate ianao. Koa satria amin'ity fomba ity dia hilamina kokoa ny resaka, hisorohana ny olana amin'izany.
Ny headphone LG dia ho hita amin'ny IFA 2018, izay hisehoany ny mombamomba azy rehetra. Ho fanampin'ny antsipiriany momba ny vidiny sy ny varotra eny an-tsena, zavatra izay mbola tsy fantatsika hatreto. Fa afaka herinandro mahery kely dia ho ofisialy.
Tsy isalasalana fa noho io fiaraha-miasa eo amin'ny LG sy Google io dia hitantsika fa manohy mandroso haingana ny mpanatrika amin'ny tsena. Araka ny Google Assistant dia mahazo vahana betsaka, efa mihoatra ny Alexa amin'ny tsena maro. Ka ny orinasa dia maniry ny hitomboany hatrany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » LG » LG dia manolotra headphones tsy misy tariby miaraka amin'ny bokotra ho an'ny Google Assistant
Samsung dia miasa amin'ny smartphone vaovao dimy ho an'i Eropa